Wararkii ugu dambeeyay dagaal gelinkii dambe maanta ka dhacay gobolka Galgaduud – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay dagaal gelinkii dambe maanta ka dhacay gobolka Galgaduud
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa dagaal aad u xoogan oo gelinkii dambe maanta dhexmaray dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab iyo ciidamo Itoobiyaan ah oo maraayay meel u dhaw deegaanka Ceel-La Helay ee gobolka Galgaduud.
Dagaalkaasi oo muddo saacado ah socday ayaa la sheegayaa inuu yimid kadib markii dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab ay jidka u galeen ciidamo Itoobiyaan ah oo ka yimid dhinaca degmada Dhuusamareeb islamarkaana kusii jeeday degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud.
Labada dhinac ayaa waxay dagaalkaasi isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana dagaalyahanada Al-shabaab u suurto-gashay inay gubaan gaadiid dagaal oo ay ciidanka Itoobiya wateen, iyagoona sidoo kale sheegay inay dileen ciidamo badan oo ka tirsan kuwa Itoobiya.
Dhinaca kale, ciidamada Itoobiya ayaa waxay iyagane dhinacooda gacanta ku dhigeen dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab ee iyaga weerarka kusoo qaaday, iyadoona labada dhinac la sheegayo inuu qasaare lixaad leh soo kala gaaray.
Sidoo kale, ciidanka Itoobiya ayaa la sheegayaa in dhowr madaafiic ay ku tuureen dhowr deegaano oo ku dhaw halka uu dagaalka ka dhacay, iyadoona aan la ogeyn qasaaraha rasmiga ah ee madaafiicdaasi ka dhashay.
Illaa iyo haatan ma jiro illo madax banaan oo xaqiijin kara qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi, marka laga reebo sheegashada ay Al-shabaab ku sheegteen inay askar badan oo Itoobiyaan ah ay dileen, halka gaari dagaal ahna ay gubeen.